Sidee loo xoojiyaa darajada iyadoo la samaynayo ujeedo raadinta webka gudaha?
Aan ka bilowno inaan ogaano waxa raadinta shabakada maxaliga ah ee dhabta ah ee dhabta u taagan (haddii kale SEO-ga maxaliga ah). Search Engine Optimization waxaa loo yaqaanaa wax-qabadka wax-qabadka ee qayb kasta oo macluumaad ah oo ku qoran boggagaaga internetka, si aad uga dhigto kuwo soo jiidasho leh raadraaca Google-ka ee raadinta shabakadda internetka ee liiska SERPs. Iyadoo la tixgelinayo wacyigelinta raadinta webka ee heer degaan, waxay u taagan tahay habka loo sameyndoono ganacsigaaga internetka in lagu soo bandhigo natiijooyinka ugu horeeya ee codsiyada raadinta degaanka. Inta badan, dadaalka raadinta shabakada sida raadinta shabakadahan waxaa lagu xalliyaa si ay uga shaqeeyaan naqshadaha diiwaanka iyo suuqgeynta suuq-geynta degaanka si loo gaaro kor u kicinta shabakada internetka ee deg dega ah ee ganacsigaaga. Hoos waxaan hoosta ku hayaa tixgelin kooban oo ku wajahan dhinacyada kala duwan ee wax ka qabashada raadinta webka oo ka shaqeeya heerka maxalliga ah.
Dhibaatooyinka ugu muhiimsan halkan waxay ku yaalaan Google My Business Page iyo raadinta shabakad ee uu u baahan yahay. Maxay tahay sababta ugu horeysa ee ugu horeysa? Sababtoo ah waxaa la aaminsan yahay in ay tahay qaybta joogitaankaaga internetka, kaas oo helay fursadaha ugu xoogan ee lagu soo bandhigo codsiyada ugu horreeya ee raadinta ganacsiyada gobolka. Haddii ay dhacdo in aadan weligaa soo booqan Google My Business Page shakhsiga ah, raadi ama bilaabi buuxinta mid hore u jirey. Waa kuwan liiska waxyaabaha laguugu taliyay inaad ku daboosho qaabka aad u raadineyso bogga: u sheeg magacaaga ganacsi buuxa, sharraxaad kooban oo ku saabsan jadwalka shaqada iyo lambarada taleefanada, iskuxirkaaga boggaaga, iyo qaar ka mid ah sawirada qanacsan ee mashruucaaga ganacsiga. Sidaa oo kale, waxaad isticmaali kartaa Google Posts, ku biiri Google Plus iyo qaar ka mid ah bulshooyinka casriga ah. Ha iloobin inaad ku dhiirrigeliso dadka isticmaala in ay ka tagaan dib u eegista qaar ka mid ah boggaga ganacsigaaga, adigoo ku dhajinaya mawduuc cusub oo cusbooneysiinaya qoraallada jira waqtigooda.
Next, hubi in ololehaaga raadinta web-ka-raadinta uu si fiican u sharraxayo sharuucyada diiwaanka. Waxaan soo jeedinayaa samaynta jeeg ayadoo la dooranayo mid ka mid ah aaladaha Tilmaame-barka ee furan. Habkan ayaad awood u yeelan doontaa inaad aragto sida wanaagsan iyo hannaanka shirkadaha ganacsiyada ay ku qoran yihiin boggaga internetka. Inta badan liistadaas waxay u baahan yihiin tallaabooyin iyo ficilo isku mid ah, sida kuwa aan horay ugu daboolnay Google My Business Page. Waxaan kugula talinayaa in la sameeyo jeeg labajibaaran sababtoo ah mashiinnada raadinta ayaa doorbidaya inay muujiyaan kaliya natiijooyinka saxda ah, markaa waa inaad ka takhalustaa wax kasta oo aan sax ahayn ama aan habooneyn oo ku saabsan ganacsigaaga. Looma baahna inaad timaaddo waqtigaada iyo dadaalkaada, maadaama ay la shaqeyneyso waxyaalahan yar waxay u badan tahay in ay ku siiyaan saameyn deg deg ah oo ku ool ah raadinta shabakaddaada maxalliga ah, markaa adoo siinaya si deg deg ah oo sare loogu qaado darajadaada. Tallaabada 3
Ugu dambeyn, waxaan kugula talinayaa in aad tixgelisid inaad tixgelisid qiimeynta bulshada. Xasuusnow, waxay arintaan sameeyaan, gaar ahaan marka la eego raadinta shabakada deegaanka. Ha ka waaban inaad sameysid liistooyinka qaar ka mid ah noocyada bulsheed sida Facebook ama Twitter, iyadoo tixgelinaya wixi muhiim ah iyo xiriiriyeyaasha u hogaaminaya qaabka aad ugu weyn tahay boggaaga muhiimka ah. Sidaa samee, hubi inaad dib-u-soo-noqosho hawlahaaga boostada, isla markaasna fiiro gaar ah u yeelato waxyaabaha tayada leh. Raadi doorashooyinka ballaadhan ee suuq-geynta bulshada, iyagoo si fiican u aqoonsan Google iyo makiinadaha kale, dadaalkaagu halkan wuxuu yeelan doonaa saameyn caafimaad leh oo ku filan oo ku ool ah raadinta shabakadaada oo buuxa Source .